Ilay saka LaPerm be fitiavana | Noti saka
Ilay saka LaPerm be fitiavana
Sary - Marylandpet.com
Raha toa ianao ka iray amin'ireo mankafy manafosafo saka lava volo, miaraka amin'ny LaPerm Tsy ho leo ianao, fa ny mifanohitra amin'izany satria lehilahy be volom-borona izy izay tia ny tenany avy hatrany.
Ankoatra izany, salama tsara Satria tsy hazakazaka namboarin'ny olombelona fatratra izy io, noho izany dia lava ny 15 taona sy 20 taona. Te hahafantatra bebe kokoa momba azy ve ianao?
1 Fiandohana sy tantaran'ny LaPerm
2 Toetrany ara-batana
3 Afaka velona firy taona ny saka LaPerm?
4 Fihetsika sy toetra
5 Fikarakarana saka LaPerm
5.5 Fitiavana sy orinasa
6 Ohatrinona ny saka LaPerm?
7 Sarin'ny saka LaPerm
Fiandohana sy tantaran'ny LaPerm
Sary - Eyeem.com
Ny niandohan'ity saka tsara tarehy ity dia any Etazonia, indrindra amin'ny zanatany saka tsy mania izay monina eo amin'ny toeram-piompiana iray any Oregon mpihaza totozy sy biby mpikiky hafa. Ao amin'ny iray amin'ireo litters teraka ny kittens manana volo olioly, ary ny sasany amin'izy ireo dia nalain'ny mpivady iray izay i Linda sy Richard Koehl.
Tamin'ny fisafidianana sy fiampitana ireo saka lava volo ireo miaraka amin'ny mitovy aminy dia nanomboka nampahafantatra tsikelikely an'io karazana mahaliana sy hafahafa nipoitra voajanahary io ireo tompokolahy Koehl. A) Eny, Tamin'ny 1997 dia natsangana ny klioban'ny amerikana voalohany antsoina hoe LPSA, ary tamin'ny taona 2003 dia neken'ny klioba fika iraisam-pirenena TICA ho toy ny karazany izy.
Na izany aza dia mbola tsy dia fantatra loatra izany, saingy efa misy ny mpiompy any Japon, New Zealand na England.
Ny saka LaPerm Volom-borona antonony izy, milanja 4 ka hatramin'ny 6kg. Ny lohany dia mihoatra ny telozoro, misy sofina mahitsy, ary ny maso, izay mety miendrika almond, mavo, volamena, manga na maitso, dia misaraka tsara.
Ny vatany izy io dia arovan'ny sosona volo olioly mety misy loko, na matanjaka, bicolor, tricolor, chinchilla, sns. Ny palitaon'izy ireo dia mety ho lava, fohy, na lava halavany, saingy ho malefaka foana izy io. Ny tongotra dia lava nefa mifanaraka tsara.
Afaka velona firy taona ny saka LaPerm?
Ny olombelona dia tsy nohararaotin'ny olona loatra, zavatra ahafahany miaina vitsivitsy 15-20 taona. Saingy mba ho tanteraka amin'ny feline anao io dia tsy maintsy omenao andiana fikarakarana fototra izay holazainay etsy ambany.
Sary - Askideas.com
Ilay maherifonay dia olona voloina tia safosafo izy. Ankafizo ny fiarahanao amin'ny fahita fahita amin'ny fahitalavitra na mandritra ny torimaso. Izany dia milamina tokoa, na dia noho ny fiandohany aza ankoatry ny fitiavana be dia be, dia mila manao fanatanjahan-tena. Tiany ny manenjika tady, baolina na kilalao fono toy ny hoe mihaza totozy.
Raha raisina io kaonty io dia tsara indrindra raha manomboka amin'ny andro voalohany omenao juguetes Azonao atao ny mampiala voly ny tenanao.
Fikarakarana saka LaPerm
Amin'ny maha-mpikarakara anao, dia tena atolotra anao izany omeo sakafo avo lenta izy ka afaka mitombo sy mivoatra araka ny tokony ho izy. Noho izany, tsara kokoa ny manome azy ireo sakafo voajanahary (hena bitro, henan'akoho, sns.), Na sakafo tsy misy serealy satria sakafo izay matetika miteraka alika amin'ny saka izany.
Isan'andro ianao dia tsy maintsy mandalo sisin-tsaka hanala volo maty, ary indraindray dia tokony diovinao ny mason-tsofina sy gauze madio (mampiasa iray ho an'ny maso sy sofina tsirairay) miaraka amin'ny rano mitete manokana.
Na dia saka milamina aza izy io, ho an'ny fadio ny mankaleo fa tena ilaina tokoa ny manokana fotoana. Ny biby dia tsy maintsy manao fanatanjahan-tena (milalao 😉) mandritra ny 40-60 minitra isan'andro, mizara fizarana kely mandritra ny 15-20 minitra.
Avy amin'ny saka mahazatra, ny fahasalamany amin'ny ankapobeny dia tena tsara. Mbola ary mbola mandritra ny fiainanao dia mety manana aretina hafa ianao, toy ny sery na gripa, ka isaky ny miahiahy ianao fa marary izy dia tsy maintsy entinao any amin'ny mpitsabo.
Mety ho mora ny mandeha any amin'ny matihanina vaksiny izy, apetraho ny microchip ary ajanony arotsaho izy raha tsy tianao hiteraka izy.
Fitiavana sy orinasa
Toy ny saka rehetra manatevin-daharana ny fianakaviana, dia maniry ny ho tsaboina am-pitiavana. Noho izany, mety izany asehoy azy fa tena miahy anao ianao -tsy misy manelingelina azy- mikarakara azy, mitondra azy amina boatin-drano mando indraindray, ary avelao izy handany fotoana betsaka araka izay azo atao eo anilanao. Ankoatr'izay, indraindray dia afaka manome fitsaboana saka (tsy misy voamadinika) koa ianao.
Ohatrinona ny saka LaPerm?
Ny LaPerm Cat dia biby izay ho mora kokoa aminao ny hahita any amin'ny mpiompy fa tsy any amin'ny fivarotana biby, satria tsy karazany fanta-daza izany. Na eo aza izany, ny vidin'ny alika kely dia tsy avo loatra: ny sasany 600-700 euros.
Sarin'ny saka LaPerm
Ahoana ny hevitrao momba ny saka LaPerm? Raha te-hijery sary bebe kokoa an'ity biby tsara tarehy ity ianao dia ireto misy:
Sary - Cattime.com
Sary - Pickapaw.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Ilay saka LaPerm be fitiavana
Java, saka saka be fitiavana
Ahoana no hikarakarana saka iray volana